Maalinle - Wuxuu dhammaanayaa usbuucii ay ahaan lahayd iyo wixii aan ahayn | Wararka IPhone
Maalin kasta - Dhamee usbuuca noqon karayey iyo kii aan ahaynba
Dhamaad Toddobaadkii ayaa la filayey in nuxur-weyne aan waligiis iman, iyo taas oo aan ugu talo galnay inaan ka helno waxyaabo badan oo lama filaan ah oo ka yimaada Apple, oo aan waligood imaan. Bilaabashada AirPods Pro iyo ku dhawaaqista Apple TV + waxay umuuqataa inay aad ugu yartahay rubucii ugu dambeeyay ee sanadka kaas oo loo malaynayo inay Apple haysato waxyaabo badan oo kadis ah. Qeybtan waxaan uga hadlayaa AirPods Pro, Apple TV +, HomeKit iyo iibsashada Fitbit ee Google.
Apple waxay soo saartay Apple TV +
Google waxay iibsataa Fitbit
Isticmaal sumadaha NFC si aad u maamusho HomeKit
Qeybtaan (ku dhowaad) maalin kasta waxaan ka hadli doonaa wararka muhiimka ah ee isla markiiba dhaca, laakiin sidoo kale mowduucyada xiisaha leh. Waxaan ku yeelan doonnaa hashtag #podcastapple firfircoon usbuuca oo dhan barta Twitter-ka sidaa darteed waad na weydiin kartaa waxaad rabto, naga yeel talo soo jeedin ama wixii maskaxdaada ku soo dhaca. Shaki, casharro, ra'yi iyo dib u eegis ku saabsan codsiyada, wax waliba waxay leeyihiin boos ku jira barnaamijkan maalinlaha ah ee aan doonayo inaan ugu dhawaado sida ugu macquulsan adiga, dhagaystayaasha.
Waxaan ku xusuusinaynaa haddii aad rabto inaad ka mid noqoto mid ka mid ah bulshooyinka ugu waaweyn ee Apple ee Isbaanishka ah, soo gal wadahadalkeena Telegram (isku xirka) halkaad fikirkaaga ka dhiiban karto, su'aalo ka weydiin karto, ka faaloon karto wararka IWM. Oo halkan lacag kama qaadanayno inaan soo galno, kulana macaamili doonno haddii aad lacag bixiso. Waxaan kugula talineynaa inaad adiga iska qor iTunes en iVoox ama Spotify si qaybaha si otomaatig ah loogu soo dejiyo isla marka la helo. Ma rabtaa inaad halkan ka maqasho? Hagaag wax yar oo ka hooseeya waxaad haysataa ciyaaryahanka aad sameyso. Waxaad sidoo kale nagala socon kartaa bartayada (isku xirka) iyo kanaalkayaga YouTube (isku xirka)
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » Maalin kasta - Dhamee usbuuca noqon karayey iyo kii aan ahaynba
Dib u eegista kiisaska maqaarka Mujjo ee iPhone 11 Pro Max